भगवानको दर्शन गर्दै साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस्: कुन राशिका लागि कति शुभ छ यो साता ? हेर्नुहोस् ग्रहफल
आज फागुन २४ देखि ३० गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल मेष तपाईंको यो साता प्रेरणा कारक रहनेछ । नौला अवसरहरू सिर्जना भई अनौठा प्रकारका रसास्वादन गर्न पाउनुहुनेछ । नयाँ स्थानहरूको भ्रमण गर्नुहुनेछ । वृष खर्च गरेर यात्रा गर्नुपर्ने हुँदा मनमा द्विविधा उत्पन गराउला । विशेष प्रकारका नौला मित्रहरूसँग परिचित हुने अवसर मिल्नेछ
यूएईमा २ नेपालीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको भेटिएको छ । सोमबार त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार २ नेपालीसहित १४ जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नयाँ बिरामीहरु फेला परेका हुन् । योसहित यूएईमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या ५९ जना पुगेको छ । सोमबार भेटिएका नयाँ संक्रमितहरुमा ४ जना यूएईका नागरिक, ३ जना
सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरि आज२०७६ फागुन २७ मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस् !हजुरहरुको दिन शुभ रहोस !
सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरि आज२०७६ फागुन २७ मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस् !हजुरहरुको दिन शुभ रहोस ! मेषः– जवर्जस्ति गरेर कहि केहि हुने छैन उल्टो हासिल गरेको उपलब्धि पनि गुम्न सक्छ । आसा र भरोसा निराशामा परिण हुने देखिन्छ । अनावस्यक काममा समय खर्च हुनेछ । विना तयारी काममा लाग्दा काम
श्रीमनकामना मन्दिरको दर्शन गरि आज२०७६ फागुन २७ मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस् !हजुरहरुको दिन शुभ रहोस !
मेषः– जवर्जस्ति गरेर कहि केहि हुने छैन उल्टो हासिल गरेको उपलब्धि पनि गुम्न सक्छ । आसा र भरोसा निराशामा परिण हुने देखिन्छ । अनावस्यक काममा समय खर्च हुनेछ । विना तयारी काममा लाग्दा काम विग्रिने छन् । मिथ्या आरोप लाग्न सक्छ सर्तक रहनु होला । लगानीका क्षेत्र नबढाउनु होला ।
शनिबार जन्मेका मानिस हुन्छन् धेरै बुद्धिमानी, जान्नुहोस् कस्तो हून्छ स्वभाब ! जानी राखौ
मानिसको बानि ब्यबहार उसको जन्मेको बार अनुसार थाहाँ पाउन सकिने ज्योतिषशास्त्र बताइएको छ । तपाई कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ तपाई जन्मेको जन्मबार, महिना र समयले पत्ता लगाउन सकिने बताइएको छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार कुनै पनि मानिसको जन्मबार अनुसार उसको बानि ब्यबहार पत्ता लगाइएको छ । त्यस्तै ज्योतिषशास्त्र अनुसार शनिबार जन्मने मानिस
श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आज२०७६ फागुन २७ मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस् !हजुर हरुको दिन शुभ रहोस !
खप्तड पर्यटकिय क्षेत्रमा पर्ने त्रिवेणी मन्दिरले विगतका बर्ष देखि पर्यटन क्षेत्र र धर्मलाई जोड्दै आएको छ । खप्तड पर्यटन क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरुले नछुटाई हेनुपर्ने एक धार्मिक पर्यटकीय पवित्र तीर्थस्थल हो । खप्तडको बिचमा अवस्थित यो मन्दिरको दायाँबाँया दुबै तिरबाट नदि बगेका छन् । यसलाई प्राचीनकालदेखि नै धार्मिक मन्दिरका रुपमा पुजिँदै
यस्तो अनौठो प्राकृतिक शिवलिंग, जसको हरेक बर्ष उचाई बढ्छ ! दर्शन गर्दा पुरा हुनेछ मनोकामना
बिश्वका धेरै देशमा हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरु छन् । ठाउँ ठाउँमा मानिसहरुलाई पु’जापाठ गर्न मन्दिर पनि ब’नाइएको छ । हिन्दुले मान्ने भगवान मध्ये एक हो शिब भगवान । हिन्दु ध’र्मग्रन्थमा पनि शिवको म’हिमा अ’परम्पार रहेको उल्लेख गरिएको छ । हिन्दु ध’र्मग्रन्थमा १२ ज्यो’र्तिलिंगको निकै महत्व राखिन्छ । यीनीहरु भन्दा अ’द्भुत
पाल्पाको रामपुरमा रहेको अनौठो गुफा जसलाई हेर्नेको लाग्छ हजारौ मानिसको भीड ! जानी राखौ
स्थानीय नागरिकको माग गरेपछि पाल्पाको रामपुरमा रहेको ‘अनौठो गुफा’ को प्रचारप्रसारका लागि खुला गरिएको छ । रामपुर नगरपालिका–४ रामघाट भुलादी खोला भुद्रुङघाटमा गत वर्ष मात्रै फेला परेको सो गुफा हेर्ने मानिसको भीड लागेको थियो । साँघुरो स्थानमा भीड बढेपछि दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै प्रवेशद्वारमा ढुङ्गा र सिमेन्टले बन्द गरिएको थियो